ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဘီလီယံဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်မှု (ပထမပိုင်း) | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဘီလီယံဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်မှု (ပထမပိုင်း)
ဦးအောင်သောင်းဟာ တောင်သာနယ် ကျောက်ကာရွာ ဇာတိဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူ (အင်္ဂလိပ်တော်လှန်တဲ့ မြင်းခေါင်း ဗိုလ်ရာညွန်ဇာတိ ကျောက်ကာနဲ့ ကပ်ရက်) ၀ဲလောင်ရွာ ဇာတိ လိုလို လိမ်ပြောလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သူ့ကို ၀ဲလောင်သားလို့ မကြာခဏ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။
ဦးအောင်သောင်းဟာ OTS-30 ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး နမခ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် စစ်တပ်မှာ အမြင့်ဆုံးရာထူးသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ န၀တခေတ် မကွေးတိုင်း တ၀တဥက္ကဌအဖြစ် နမခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်က မြှောက်စားထားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်သွား ချိန်မှာ မန္တလေးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိ နန်းတွင်းဧည့်ရိပ်သာမှာ ဦးအောင်သောင်းအား ခေါ်တွေ့ခဲ့ပြီး သူနဲ့ အတူ လိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ကုန်သွယ်လယ်ယာ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရက်ပိုင်းသာ လုပ်နေချိန်မှာ မိတ်ဆက်စားပွဲ ကျင်းပပြီး ကုန်သွယ်ရေး ဒု-၀န်ကြီးအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းကြည်က ထိုးတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေအား ဦးအောင်သောင်းရဲ့ အဖားတော်မှုကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနကနေ မွေး/ရေ၀န်ကြီးအဖြစ် ဆက်လက် ရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အမျိုး စစ်ဆေးရုံ (၂) မှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့စဉ်က မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းဟာ လက်ဆောင်ပဏာများစွာနဲ့ ကုသမှု ပါရဂူဆရာဝန်များအား ပေးကမ်းခဲ့လို့ ခွဲစိတ်ခန်းအထိ ၀င်ကြည့် ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ န၀တခေတ် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးစိန်အောင် ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာ မွေး/ရေ၀န်ကြီးမှ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနမှာ သာပေါင်း စက္ကူစက်ရုံ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု လုပ်နေတာကို ထောက်လှမ်းရေးက ခြေရာခံလိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကတည်းက သူ့ကို ထောက်လှမ်းရေးတွေက ဖြုတ်ဖို့ ကြံစည်နေတာမို့ ဦးသန်းရွှေကို ပြေးကပ်သလို ဦးမောင်အေးကိုလည်း သူ့သား ဗိုလ်ပြည်အောင်နဲ့ ဦးမောင်အေး သမီး နန္ဒာအေးကို ရအောင် ယူခိုင်းပြီး အကာအကွယ်ယူလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးအဖြစ် လုပ်ခဲ့ချိန် ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းမှာ စက်မှု (၁) စက်ရုံတွေက လိမ်ထားတာ တော်တော်များများကို ဆိုးခဲ့ပြီး မလည်မပတ်နိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ အစိုးရသစ် တက်လာတော့ စက်မှု (၁) ကို ဖြုတ်လိုက်တာမို့ ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းဟာ စားလို့ဝါးလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို UOB, OCBC ဘဏ်တွေမှာ အပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သူ့သား ဦးနေအောင်ကတော့ အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီ စတင်တည်ထောင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တစတစ ချမ်းသာလာကာ IGE ကုမ္ပဏီအကောင့်တွေနဲ့ ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာ အပ်နှံထားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
လက်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ သူအရင်တုန်းက လာဘ်စားခဲ့တာ အရေးယူခံရမှာစိုးလို့ နေရာတခုရအောင်ယူပြီး ကုပ်ကပ်နေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ယခင် တနသာင်္ရီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော် ပြုတ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်း သူ့လက်ချက်မကင်းကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်းဟာ ဘယ်လောက်အထိ လိမ်ညာလာဘ်စားသလဲဆိုရင် ကျောက်ဆည်မှာ စွပ်ကျယ်စက်ရုံဖွင့်ပွဲလုပ်ရာမှာ စက်ရုံက ကောင်းစွာ မလည်နိုင်သေးတာမို့ တရုတ်နယ်စပ်ကနေ စွပ်ကျယ်တွေ ၀ယ်၊ ပြီးရင် စက်မှု (၁) တံဆိပ်တပ်ကာ သူ့စက်ရုံကနေ ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီး လိမ်ညာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုလိမ်ခဲ့တာကို ဦးသန်းရွှေ သိရှိခဲ့ဟန်မတူကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနဲ့ နီးစပ်သူများက ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းဟာ နေရာရချင်တာမို့ ကြံ့ခိုင်ရေးကို ဂိုဏ်းတွေ ကွဲအောင် လုပ်ဖို့အထိ သူ့မှာ အကြံအစည်ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း အဆင်မပြေတာကြောင့် သမ္မတကတော့ သူ့ကို မကြိုက်ဟန်တူကြောင်း စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ တဆင့် တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အဂတိလိုက်စားမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမယ့် ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း ဝန်ခံတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဂတိလိုက်စားမှုမှာ စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးကတော်နဲ့ သားသမီးတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းကိုယ်တိုင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဝန်ခံခဲ့တယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကို စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ စက်ရုံ တွေမှာ အလာမခံဖို့နဲ့ လာရင်လည်း လက်မခံပါနဲ့ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်း ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီး စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနတွင်း မကြာခင်က ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေ စက်မှု (၁) လက်အောက်ခံ စက်ရုံတချို့ရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ စသုံးလုံးက စစ်ဆေးအပြီးမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းကို သတိပေးခဲ့တာပါ။ မကြာခင် ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းက ခုလို ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်းသိရပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ၄၇ နှစ် သက်တမ်းတလျှောက် ဝန်ကြီးကတော်နဲ့ မိသားစု အဂတိ လိုက်စားမှုကြောင့် ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် တရားဝင် တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လို့ ကျန်တဲ့ နေပြည်တော် ဝန်ကြီးဌာနတွေပါ အံ့အားတသင့် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
မကြာခင်လပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စက်မှု (၁) လက်အောက်ခံ ဇေယျဝတီသကြားစက် ကြံခင်း ပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စအမှုမှာ ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ဇနီးလွှတ်ထားသူနဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ အတွင်းလူနှစ်ဦး ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာ့ဦးပိုင်လီမိတက်ကိုလွှဲမယ့် ဇေယျဝတီသကြားစက်က စက်အရန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ဆုံးနေလို့ မြန်မာ့ဦးပိုင်လီမိတက်က သကြားစက်ကို လက်မခံလို့ စသုံးလုံးက ဝင်စစ်ရတဲ့အဖြစ် ရောက်ခဲ့တယ်လို့ စက်ရုံအရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ သားပိုင်တဲ့ IGE ကုမ္ပဏီမှာ သားဖြစ်သူ ကိုနေအောင်က မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဖြစ်ပြီး ဦးအောင်သောင်းရဲ့ သားလည်းဖြစ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးရဲ့ သမက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးပြည့်အောင်က ဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အီးယူက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုများ နာမယ်ပျက်စာရင်းမှာ ပါရှိပါတယ်။
မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘောဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအများစုကို ဦးအောင်သောင်းသားပိုင်တဲ့ အိုင်ဂျီအီးကုမ္ပဏီကိုသာ တဖက်သတ် အနိုင်ပေးခဲ့တာ များတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရေနံအရာရှိ တဦးကလည်း ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ ဦးအောင်သောင်းသားပိုင်တဲ့ အိုင်ဂျီအီးကုမ္ပဏီက သွင်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေဟာ တရုတ်လုပ် ခပ်ညံ့ညံ့ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ တင်သွင်းခဲ့တာလို့ စုံစမ်း သိရပါတယ်။
အိုင်ဂျီအီးကုမ္ပဏီနဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ပေါင်းပြီးသွင်းတဲ့ အရည်အသွေးမမီတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို ဘာကြောင့် မြန်မာ့ရေနံနဲ့သဘောဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းက ဝယ်သုံးရသလဲလို့ တင်ဒါပြိုင်ဘက် ကုမ္ပဏီ တချို့က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
သာပေါင်းစက္ကူစက် တည်စကလည်း အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ရှိနေကြောင်း စက်မှု (၁) ဒုတိယ ဝန်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းက သတင်းပို့လိုက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်က အသေးစိတ် စစ်ဆေး ခဲ့ပေမယ့် အရေးမယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ခေတ်ပြိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဗိုလ်ထက်မင်းက ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာပေါင်းပျော့ဖတ်စက်ရုံကို တရုတ်ကုမ္ပဏီအကူအညီနဲ့ တည်ဆောက်ရာမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဦးအောင်သောင်းကို ဒေါ်လာ ၁ သန်း ကော်မရှင်ပေးရတယ်လို့ရန်ကုန် အနောက်တိုင်း သံတမန်တချို့က သံသယရှိကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကနေ့ဆိုရင် ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတလွှား သားသမီးနာမည်နဲ့ ထားတဲ့ စက်ရုံတွေ၊ ခြံမြေတွေ၊ အပမ်းဖြေ ဥယျာဉ်တွေ၊ ကိုယ်ပိုင်တိုက်တာတွေ အများအပြားဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းဟာ တချိန်က မကွေးတိုင်း ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ကနေ မကွေးတိုင်း ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ ဒီ့နောက် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ မကြာခင် ဦးအောင်သောင်း ဒု-ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး အဆင့်ဆင့်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးအောင်သောင်းဟာ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဘဝမှာကတည်းက လာဒ်စားမှုအရာမှာ ထင်ရှားခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့က ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်ချန်ထွန်းက ထောက်ပြပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှုမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေတဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ စက်ရုံပိုင်ဆိုင်မှု … စသဖြင့် ခွဲကြည့်မှ ပိုပြီး သရုပ်ပေါ်လွင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအပိုင်းကို ကြည့်ရင် ရန်ကုန် သမိုင်းချည်စက်နားမှာ နန်းတော်လို ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကြီးဟာ ဦင်္းအောင်သောင်း ပိုင်တဲ့အိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိမ်ကြီးကို စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စီးပွား ဖက်စပ်လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေ အကူအညီနဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမိုဝေယံဘလော့ဆိုက်က ခုလို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
မောင်ဆောက် ( ကျောက်ကာ )
This entry was posted in Artical and tagged ရန်ကုန်, ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်း, ဝန်ကြီးအောင်သောင်း, ဦးအောင်သောင်း, ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဘီလီယံဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်မှု, နေပြည်တော်, အောင်သောင်း, မြန်မာ, မြန်မာဝန်ကြီး, ၂၀၁၄, Billion own by U Aung Thaung, Minister Aung Thaung, Myanmar, Myanmar Minister, Myanmar Minister Aung Thaung, U Aung Thaung, U Aung Thaung's billion dollor worth on August 10, 2014 by koshwehtoo.
← Ooredoo ကို ဆန့်ကျင်သတဲ့လား? ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဘီလီယံဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်မှု (ဒုတိယပိုင်း) →